Maninona ny Apple Pencil no mihoatra ny Wacom Cintiq | Vaovao IPhone
Iray amin'ireo zava-baovao tsy fantatra indrindra amin'ny iPad Pro, izay natolotra niaraka tamin'ny Apple TV 4 sy ny iPhone 6s / Plus, dia iray amin'ireo kojakojany: ny Apple Pencil. Miaraka amin'ity Stylus ity, ny mpampiasa dia afaka manoritra na mandray naoty miaraka amin'ny hery marina tian'izy ireo ampiharina, ary koa ny fitongilana tadiavina. Mpampiasa maro no mino fa ny Wacom Cintiq no mari-pamantarana amin'ity karazana fitaovana ity, saingy tsy nanaiky mihitsy ny mpamorona endrika, Linda Dong.
Linda Dong dia mpamorona niasa tao amin'ny Ekipa prototyping an'ny Apple, mamantatra ireo hevitra momba ny fampidirana mpampiasa vaovao ho an'ny fitaovana sy ny haitao ho avy. Talohan'izay dia niasa tamin'ny ekipa fampiharana horonantsary an'i Apple ihany koa izy ary nanampy tamin'ny famolavolana ny kinova farany an'ny Final Cut Pro sy iMovie. Ity fampahalalana manaraka ity dia zavatra navoakany tao amin'ny bilaoginy manokana efa ho roa herinandro lasa izay, anisan'izany ilay «Mametraka azy mahitsy: mitroka amin'ny fampitahana ny Cintiq. Ary efa an-taonako no nampiasaiko ho an'ny sary famolavolana indostrialy, fampifandraisan'ny mpampiasa ary zavakanto.".
Araka an'i Dong, ny Apple Pencil dia mandresy ny Wacom Cintiq amin'ny:
1 Stylus Design
2 Famolavolana ivelany
Ny Apple Pencil dia manana vatana tery kokoa amin'ny tendrony, mamela ny pensilihazo tsy handrakotra izay ataontsika. Raha ny filazany, manome fahalalahana bebe kokoa amin'ny fivezivezena koa izy io rehefa manao sary. Ny pensilihazo Cintiq dia lehibe, mihodinkodina ny tendron'ny tendrony, tafintohina amin'ny rantsan-tànana ny rantsan-tànana ary mahatsapa ho plastika mora vidy daholo ny zava-drehetra.
Cintiqs mavesatra, mavesatra be. Heverin'izy ireo fa mora entina izy ireo. Ny ankamaroan'izy ireo dia miaraka amina tadiny goavambe satria mila mifandray amin'ny solosaina izy ireo. Ny reti dia tsy retina, ny lokony mikorontana, ny mamirapiratra azon'izy ireo aseho dia tsy dia mamirapiratra ary ny mazava dia hita taratra. Ny tena zava-dehibe dia manana elanelana be eo amin'ny penina sy ny efijery nomerika ny efijery. Tsy misy na inona na inona manome ny fahatsapana fa manintona an'ity sehatra ity isika. Ireo rehetra ireo dia tsy olana amin'ny iPad Pro, izay manana rafitra fikirakirana manokana ihany koa ary manana rafitra multitouch, mba hahafahantsika mandoa $ 2000 + ho an'ny multitouch amin'ny Cintiq.
Latency, laténdrika, laténdrika. Nilaza i Dong fa hitany ny faharetan'ny sary hahatratra ny penin'ny Cintiq. Tsy azontsika fantarina hoe oviana no hijanonana satria tsy azontsika antoka ny halavirantsika. Ity olana ity dia tsy misy amin'ny Apple Pencil. Saika tsy misy latency, noho izany ny fahatsapana dia mampiasa pensilihazo tena izy isika, manamarika rehefa manao sary sy ny toerana anaovantsika sary. Hita ihany koa fa ny tsindry sy ny fitongilana dia ekena kokoa noho ny Cintiq. Ny vokany: manaova sary mihoatra ny noeritreretinao tany am-boalohany.
iPad Pro + Apple Pencil: $ 899 - $ 1.179
Cintiq mora vidy indrindra, tsy mikasika: $ 799
Ny maodely Cintiq hafa rehetra: $ 1.000-2.800
Ny toro-hevitra farany nataon'i Linda Dong dia ny olona rehetra mieritreritra ny hividy solosaina Apple na Cintiq, manalavitra ny Cintiq, indrindra ireo mpianatra. Ho an'ireo matihanina izay mifandray amin'ny Cintiq amin'ny solosaina mihazakazaka Solidworks, C4D, CAD ... tohizo ny rantsan-tànanao hanao fampiharana ho an'ny iPad.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Maninona ny Apple Pencil no mandresy ny Wacom Cintiq
Lazao ilay zazavavy mahafatifaty mba handeha hatory matetika, jereo fa tsy maintsy nomeny paoma izy hiteny zavatra adaladala toy izany, ary ny mahatsikaiky dia azo antoka fa mihoatra ny iray no hino an'io
Ary nahoana izahay no tsy maintsy mino anao? Efa nanandrana ny DOS ve ianao?
Tsy ny finoana an'i Chooviik no resahina, fa ny zava-misy voatanisa dia hoe niara-niasa tamin'i Apple tamina tetikasa maro io tovovavy na tovovavy io fa tsy nianatra ... ka ny fizarana nataony dia farafaharatsiny "ampahany" ary "mitanila" koa. ny teny toy ny "shit fampitahana" dia mampatsiahy ahy ireo teny natokan'ny sasany ho an'ny galaxy note ... eny, ilay nanana "stylus" ... ary izao dia tsy miteny na inona na inona izy ireo.
Ianao no ohatra, ndao hojerentsika, Wacom natokana ho an'ity sehatra ity, na Apple natokana hivarotra anao fa izy ireo no mamorona ny zava-drehetra ary izy no tsara indrindra, miala tsiny zaza, fa ianao kosa dia mampametra-panontaniana anay ny fahaizanao misaina.
Alex Montalvo dia hoy izy:
Tsy fantatro raha efa niara-niasa tamina programa maodely modely 3D toa ilay nolazainao ianao, fa mba hanomezana ohatra anao, ny fepetra takiana amin'ny solidworks dia ny 8Gb Ram ary sary PROFESSIONAL. Fantatro fa tianao ny iPad Pro afaka miasa miaraka amin'ity karazana programa ity kanefa miaraka amin'ny iOS ho toy ny rafitra miasa ary miaraka amin'ny sary hijerena sarimihetsika sy milalao kilalao mahazatra dia fanevatevana ny fiantsoana azy hoe iPad PRO. Ka raha te handany ny volanao ianao dia mividiana pro iPad sy ny stiliny ho anao, saingy matahotra aho fa hihomehy anao ny olon-drehetra rehefa lazainao azy ireo fa tsy afaka mametaka tapa-USB ianao na misintona syllabus an-dakilasy . Saingy, afaka mino ny tenanao foana ianao hoe Mpanjaka ary miteny amin'ny olon-drehetra fa hendry ianao amin'ny fandaniana 900 € amin'ny takelaka misy pensily sy paoma manaikitra.
Valiny tamin'i Alex Montalvo
Hatramin'ny nanaovan'izy ireo ireo fanamarihana ireo dia fiasco ny vokatra, mazava ho azy fa mila manasa ati-doha izy ireo, ny ratsy indrindra azony. Fantatsika tsara fa ny ankamaroany dia tsy mahalala izay voalaza ao, amin'izao fotoana izao dia hivoaka fa efa am-polony taona maro i Apple no nikaroka.
Gurusbiter dia hoy izy:
Azoko antoka fa efa niomana ny vahoaka Wacom talohan'ny nivoahan'ny iPad Pro ary nisy fanamboarana niavaka. Raha tsy izany dia hanimba mivantana ny varotra Cintiq ny iPad Pro ...
Mamaly an'i Gurusbiter
Apple dia handrava ny varotra, na dia azoko lazaina aza, saingy fantatsika ny antony hitrangan'izy ireo, izany no olona manambady, ny tiako holazaina dia tsy afaka misaina ny ankamaroan'izy ireo.
Ho fanampin'izany, ny iPad dia afaka mifandray amin'ny solosaina amin'ny alàlan'ny fampiharana iray hampiasana azy ireo toa ny ciniq, fantatrao ve? Ny iPads ankehitriny dia efa nanao azy tamin'ny iPad pro ary ny pensilihazo no tokony hampiantrano azy!
Ny tiako ho fantatra dia raha miasa miaraka amin'ny ipad hafa ny pensilihazo.
Salama Andres. Amin'ny teôria, eny. Aza adino, hoy aho "amin'ny teôria." Ilay manao ny "majia" no gadra. Ny iPad Pro dia tsy manan-javatra manokana amin'ny efijery (tsy manana "2D" Force Touch akory). Ny zavatra anananao dia ny fampiharana "pro", ndao lazaina. Raha mamolavola ireo fampiharana ireo ho an'ny iPad mahazatra izy ireo dia tokony handeha ny Apple Pencil.
Antonio Vazquez dia hoy izy:
Mampalahelo izaitsizy, very henatra i Apple. Tsy afaka mividy fiasco hafa ry zareo, saingy matahotra aho fa ity lovia misy fampiasa amin'ny logo ity dia hanohy ny fihenan'ny Mac Book amin'ny 1500 SLOW euro, ny ipod amin'ny 400 izay tsy misy mividy, ireo famataranandro izay efa tao anaty vatasarihana herinandro. ny tara-pahazavana… Ary ireo iPhones izay taitra rehefa avy nanantona azy ireo tamin'ny iOS9.
Nanomboka ny fidinana.
Satria tsy mifandray amin'ny vato fikosoham-bary intsony ny olona.
Valiny tamin'i Antonio Vazquez
Eny, hiteny indray i Apple fa firaketana varotra iray hafa io.
Fa inona no azonao antenaina hambara ao? Iza no very vola?
Milatsaka ve ny tahiry?
trescondor dia hoy izy:
inona ny votoatin'ny dity mino aho, efa nividy roa aho, intuos pro M izay niverina ary nosoloiko vehivavy iray hampiala voly ahy ary hanome fotoana an'ireo fako izay milaza fa ho an'ny mpanao sariitatra ary tokony hisy ny toerana aiza ao amin'ny talantalan'i Toy s rus.
Mamaly an'i trescondor
Amil yafet dia hoy izy:
Miarahaba antsika rehetra, manoro hevitra aho ny tsy hividy iPad Pro farafaharatsiny tsy amin'izao fotoana izao, indrindra ho an'ireo izay te hampiasa azy io ho takelaka ho an'ny kanto nomerika. Novidiko ny ahy iray volana lasa izay ary mihamangatsiaka ny écran, mivadika volondavenona sy marihitra. Hadihadio ary maro ny fitarainana momba an'io olana io eo amin'ny efijery, mbola tsy nahita ny olana i apple ary efa roa volana izy ireo no nanadihady ary na dia taorian'ny fanolorana fanamboarana izay hita tamin'ny fanohanan'ny paoma aza dia mbola mitohy ihany ny raharaha. Misy ihany koa ny olana hafa amin'ny fandefasana sy ny tsy fahatsapana ny efijery amin'ny fotoana sasany, fa ity farany kosa dia tsy niainako tamin'ny ipad. Nentiko tany amin'ny fivarotana paoma ny ipad ary nolazain'izy ireo tamiko fa 15 andro lasa izay taorian'ny fividianana dia tsy afaka nanova izany izy ireo fa hitondra azy io hanamboarana. Andro maromaro taty aoriana dia naverin'izy ireo tamiko izany fa ny olana dia mitohy anio iray andro aorian'ny nahazoany azy ary nahita ny olana indray, ampitaiko any amin'ireo dinika mifandraika izany, satria io olana io dia midika fahaverezan'ny vola ho ahy amin'ny maha-mpanakanto sary ahy ahy, ao amin'ny asa izay mitaky an'ity fitaovana ity sy ny fotoana hatramin'ny nanampiako ny mac-ko hanao ny asa amin'ny fomba voafetra kokoa. Ho fanampin'izay, nandany vola tamin'ny mailaka aho handefasana azy io satria tsy misy fivarotana paoma ao amin'ny toerana onenako. Mampalahelo sy mijaly amin'ny fanahiko taorian'ny fanandramana fanindroany ity, izaho izao dia mieritreritra ny hangataka ny hamerenako ny volako. Hatramin'ny nandaniako fotoana sy vola be. Raha ny tolo-kevitro, raha tsy tena ilaina dia aza mividy ny iPad Pro farafaharatsiny amin'ity taona ity, hevero ho safidy io aorian'io rehefa efa vokatra efa an-tsena efa ela izy io ary namboarina ireo lesoka ireo. Tena sosotra mafy aho ary tsy milaza izany amin'ny hafa.
Valiny tamin'i Amil Yafet
Gilbert Eddie Perez Diaz dia hoy izy:
5 taona taty aoriana dia nivoatra ho fanasoavana aho xD
Amin'izao fotoana izao ny tsara indrindra hanaovana sary nomerika dia ny ipad pro an'ny 2020 ankehitriny
fa hoy izy mbola tsy mandeha be loatra ho an'ny 3D, akaiky ny Sharp3D fa mbola lavitra ny Solid na Autodesk
te-ho mpanao sary nomerika? mandehana mitady ipad
Valiny tamin'i Gilbert Eddie Perez Diaz
Instant dia mamela anao hikajiana ny fotoana laninao amin'ny fampiasana ny iPhone